Bit By Bit - Fananganana fiaraha-miasa betsaka - 5.4.2 PhotoCity
Ny tranonkala toy ny Flickr sy ny Facebook dia ahafahan'ny olona mizara sary miaraka amin'ny namany sy ny fianakaviany, ary mamorona sarivongana sarobidy maro azo ampiasaina amin'ny tanjona hafa. Ohatra, i Sameer Agarwal sy ireo mpiara-miasa (2011) nanandrana nampiasa ireny sary ireny ho "Build Rome amin'ny Andro iray" amin'ny alalan'ny fananganana sary 150.000 an'i Roma hamoronana fanavaozana 3D io tanàna io. Ho an'ny sasantsasany amin'ireo sary be sary manjavozavo - toy ny Coliseum (sary 5.10) - ny mpikaroka dia nahomby tamin'ny ampahany, saingy ny fanarenana dia nijaly satria ny ankamaroan'ny sary dia nalaina avy tamin'ny fomba fijery tokana ihany, namela ampahany tamin'ireo trano tsy voasoratana. Noho izany, tsy ampy ireo sary avy amin'ny sary napetraka. Ahoana anefa raha misy mpilatsaka an-tsitrapo afaka haka sary ireo sary ilaina mba hanatsarana ireo efa misy? Mieritreritra ny miverina amin'ny tantara an-tsary ao amin'ny toko 1, manao ahoana raha azo oharina amin'ny sary custommade ny sary namboarina?
Sary 5.10: Fanavaozana 3D an'ny Coliseum avy amin'ny sary marobe 2D avy amin'ny tetikasa "Building Rome amin'ny Andro iray." Ny triangolo dia maneho ny toerana izay nalaina sary. Navoaka tamin'ny alàlan'ny alalana avy amin'ny alemana HTML amin'ny Agarwal et al. (2011) .
Mba hahafahana mamela ny angon-drakitra be dia be dia be, Kathleen Tuite sy ny mpiara-miasa dia nanangana ny PhotoCity, lalao fampakaram-bady. PhotoCity dia namadika ny sarimihetsika tetikasam-pandraharahana momba ny angon-drakitra - nampidirina sary - ho toy ny asan'ny ekipa, ny lapa ary ny sainam-pirenena (sary 5.11), ary nampiasaina voalohany mba hananganana fanavaozana 3D an'ny oniversite roa: ny Oniversite Cornell sy ny Oniversite Washington. Nanomboka ny doka ny mpikaroka tamin'ny famoahana sary avy eny amin'ny trano sasany. Avy eo, ny mpilalao ao amin'ny campus tsirairay dia nanara-maso ny toetry ny fananganana indray ary nahazo tsindrim-peo amin'ny alàlan'ny famoahana sary izay nanatsara ny fanarenana. Ohatra, raha toa ka tsy misy dikany ny fanarenana indray ny Biblia Uris (any Cornell), dia afaka mahazo teboka ny mpilalao iray amin'ny alàlan'ny famoahana sary vaovao. Ny singa roa amin'ity dingana fanentanana ity dia tena zava-dehibe. Voalohany indrindra, ny isan'ireo teboka mpilalao iray noraisina dia mifototra amin'ny habetsaky ny sary nampidirin'ny fanarenana. Faharoa, ny sary navoaka dia tsy maintsy niitatra tamin'ny fanarenana efa misy, mba hahazoana valiny. Tamin'ny farany, ireo mpikaroka dia afaka namorona modely 3D avo lenta ho an'ny roa amin'ireo toby (sary 5.12).
Sary 5.11: Ny PhotoCity dia namadika ny tetik'asa mety hanangona rakitra (izany hoe mampakatra sary) ary namadika azy ho toy ny lalao. Navoaka tamin'ny alalana avy amin'ny Tuite et al. (2011) , sary 2.
Sary 5.12: Ny lalao PhotoCity dia nahatonga ireo mpikaroka sy mpandray anjara mba hamorona endrika modely amin'ny trano avo lenta izay mampiasa sary izay nalain'ireo mpandray anjara. Navoaka tamin'ny alalana avy amin'ny Tuite et al. (2011) , sary 8.
Ny famolavolana ny PhotoCity dia namaha olana roa izay matetika no hita ao amin'ny fanangonana fizarana data: valim-panadihadiana sy fametrahana data. Voalohany, nekena ny sary tamin'ny fampitahana azy ireo tamin'ny sary teo aloha, izay nampitahaina tamin'ny sary teo aloha tamin'ny lalana mankany amin'ny sarimihetsika novolavolain'ny mpikaroka. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia sarotra be ho an'ny olona ny mampakatra sarinà trano tsy mety, na tsy fantatra na tsia. Io endri-javatra noforonina io dia midika fa ny rafi-piarovana dia miaro tena amin'ny tahiry ratsy. Faharoa, nampiofana ny mpandray anjara ny fanangonana ny sarany indrindra-fa tsy ny fampahafantarana mahasoa indrindra. Raha ny marina, eto ny sasantsasany amin'ireo paikady izay nilazan'ny mpilalao ny fampiasana mba hahazoana tsipika bebe kokoa, izay mitovy amin'ny fanangonana tahirin-kevitra sarobidy kokoa (Tuite et al. 2011) :
Asehon'ireto fanambarana ireto fa rehefa nomena fanehoan-kevitra mifanaraka amin'izany ireo mpandray anjara, dia mety ho lasa manam-pahaizana manokana izy ireo amin'ny fanangonana antontan-kevitra mahaliana ny mpikaroka.
Amin'ny ankapobeny, ny tetikasa PhotoCity dia maneho fa ny fametrahana sy ny kalitaon'ny data dia tsy olana tsy azo ovaina loatra amin'ny famoritana angona angona. Ankoatr'izay dia mampiseho fa ny tetikasa fanangonana tahirin-kevitra dia tsy voafetra amin'ny asa efa ataon'ny olona hatramin'izao, toy ny fijerena vorona. Amin'ny alalan'ny endrika tsara, dia afaka ampirisihina hanao asa hafa koa ny mpilatsaka an-tsitrapo.